Kachasị mma anụ mmiri oyi ụlọ nchekwa Onye nrụpụta na ụlọ ọrụ | Runte
Nchekwa ụlọ oyi na-atụ anụ azụ azụ
Kwesịrị ekwesị maka nchekwa: ọkụkọ, dumplings, anụ, ice cream, azụ, nri mmiri na ihe ndị ọzọ.
1.-18 ~ -25 degrees, gbanwee dị ka ihe dị mkpa ka ị na-echekwa.
2. Mpempe nchekwa nchekwa ụfụfụ dị elu, mmetụta nchekwa ọkụ dị mma
3. International brand Bitzer, Carrier Compressor, arụmọrụ dị elu na nchekwa ike
4. Onye na-akwado ya na-anabata akara mbụ nke ụlọ, nke nwere nnukwu ikuku ikuku na ikuku ikuku
5. Nye gị integrated ịbịaru imewe ọrụ
Ụlọ ihe nchekwa anụ mmiri ice cream Parameter
Akụkụ ahaziri ogologo, obosara, elu
Igwe nju oyi Onye na-ebu / Bitzer / Copeland wdg.
Ụdị refrigeration Ikuku jụrụ oyi/mmiri ajụọ oyi/ekupụ dị mma
Igwe nju oyi R22,R404a,R447a,R448a,R449a,R507a Refrigerant
Ụdị nkwụsịtụ Igwe ọkụ eletrik
Voltaji 220V/50Hz,220V/60Hz,380V/50Hz,380V/60Hz,440V/60Hz nhọrọ
Ogwe Ihe mkpuchi mkpuchi polyurethane ọhụrụ, 43kg / m3
Ọkpụrụkpụ panel 120mm 150mm 180mm
Ụdị ọnụ ụzọ Ọnụ ụzọ kpọgidere, ọnụ ụzọ na-amị amị, ọnụ ụzọ eji eletrọnịkị na-agbagharị okpukpu abụọ, ọnụ ụzọ ụgbọ ala
Okpomọkụ nke ụlọ -18 ~ -25 ℃ nhọrọ
Ọrụ ọkụkọ, dumplings, anụ, ice cream, azụ, nri mmiri, wdg.
Ngwakọta Agụnyere ihe niile dị mkpa, nhọrọ
Ebe a ga-ezukọta Ọnụ ụzọ ime ụlọ/n'èzí (ụlọ ihe owuwu ihe / ụlọ ihe owuwu ígwè)
Uru na atụmatụ
1.Nye ngwọta zuru oke
Site n'ịghọta mkpa gị, anyị nwere ike ịnye gị ngwọta nhazi nchekwa oyi bara uru karị
2.Professional oyi nchekwa imewe na-ewu
Na-arụ ọrụ maka afọ 22, ihe ọmụma ọkachamara bara ụba, ahụmahụ afọ na nhazi nchekwa oyi na ihe owuwu.
3.Cold nchekwa ewu ụlọ ọrụ iru eru
Ụlọ ọrụ ahụ na-etinye aka dị ukwuu na nchịkọta ahụmahụ, ma na-etinyekwu uche na nkwalite nke ike nke ya. O nwere ntozu maka ọkpọkọ nrụgide, nrụnye eletriki na nrụzi, yana ntinye na nrụzi akụrụngwa refrigeration. O nwekwara ọtụtụ akwụkwọ ikike imepụta ihe iji duga nhazi na iwu ebe nchekwa oyi.
4.Experienced ọrụ otu
Ọtụtụ ndị injinia nchekwa nchekwa oyi anyị anọwo na-azụ ahịa kemgbe ọtụtụ iri afọ, nwee aha ndị ọkachamara, ma nwee ihe karịrị 10,000 nchekwa nchekwa nchekwa oyi.
5.Ọtụtụ ndị na-eweta ika a ma ama
Companylọ ọrụ anyị bụ ụlọ ọrụ OEM nke Carrier Group, ma na-akwado nkwado ogologo oge yana kwụsie ike na ụdị mba ụwa mbụ dị ka Bitzer, Emerson, Schneider, wdg.
6.Timely pre-sales na mgbe-sales ọrụ
A na-enye nkọwa n'efu maka imepụta nchekwa oyi na ihe owuwu tupu ire ere, na mgbe ire ere: nrụnye na ntinye akwụkwọ ntuziaka, na-enye ọrụ azụmaahịa mgbe awa 24 kwa ụbọchị, na nleta na-esochi mgbe niile.
100/120/150/180/200mm panel Bitzer / Carrier / Emerson na nkeji ndị ọzọ Igwe nju oyi dị elu nke ọma
0.426mm ígwè panel，Ụfụfụ ahụ ruru njupụta nke 38-45 n'arọ, na-arụ ọrụ nchekwa ọkụ dị mma na enweghị nrụrụ. Compressor mbụ ebubatara nwere oke ọrụ ike yana nnukwu ike jụrụ oyi. Ịchekwa ike, na-echekwa ụgwọ ọrụ. Igwe ikuku dị n'otu na ebe ikuku ikuku dị ogologo, nke nwere ike hụ na oyi na-atụ oyi nke nchekwa oyi.
ọnụ ụzọ ụlọ oyi Igbe nkesa
Enwere ike ịhọrọ ọnụ ụzọ mgbanaka ma ọ bụ ọnụ ụzọ na-amị amị dị ka mkpa si dị, na-eji ngwaike dị elu, siri ike ma na-adịgide adịgide, yana arụ ọrụ mkpuchi dị mma. Iji mba ụwa ika elu-edu eletriki components, centralized akara, adaba ịgbanwe okpomọkụ na ụlọ nkwakọba ihe.
Danfoss Solenoid Valve Danfoss Mgbasawanye Valve Ọla kọpa ọkpọkọ
Njikwa na nhazi nke mmiri na gas Jikwaa ọsọ nke refrigerant Mgbidi tube dị nro na enweghị adịghị ọcha na ọnụ ọgụgụ oxide. Gbaa mbọ hụ na tightness na ịdị ọcha nke pipeline.
Ọkụ maka ụlọ oyi Ihe mkpuchi ikuku
Igwe anaghị egbochi mmiri, mkpuchi uzuzu na mgbawa, nchapụta dị elu, nnukwu ebe ọkụ. Kewapụ mgbanwe ikuku n'ime na n'èzí ụlọ nkwakọba ihe iji nọgide na-enwe okpomọkụ kwụsiri ike n'ụlọ nkwakọba ihe.
Ọnọdụ ime ụlọ oyi
Philippine obere ụlọ oyi
Ime ụlọ oyi na mkpụrụ osisi Malaysia
British nhazi ụlọ oyi
US akpa ụlọ oyi
Uruguay Logistics oyi ụlọ
American Food oyi ụlọ
Kambodia nhazi ụlọ oyi
Nigeria Vaccine ụlọ oyi
Ọrịre mbụ-na ọrịre-Mgbe ire ere
Nke gara aga: Ngosipụta anụ ọkụkọ n'ọnụ ụzọ iko
Osote: azụ ọhụrụ na anụ ngwa ngwa gbawara friza ụlọ nchekwa oyi
Ime ụlọ oyi 20ft
Ime ụlọ oyi 40ft
Ime ụlọ oyi na-atụ oyi
Ngwa ime ụlọ oyi
Ụlọ oyi Maka banana
Ụlọ oyi Maka anụ ehi
Ụlọ oyi maka ihe ọṅụṅụ
Ụlọ oyi Maka akwa
Ụlọ oyi Maka Azụ
Ụlọ oyi maka okooko osisi
Ụlọ oyi Maka nri
Ụlọ oyi Maka Mkpụrụ
Ụlọ oyi Maka mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri
Ụlọ oyi Maka anụ
Ụlọ oyi Maka nduku
Ndị na-emepụta ụlọ oyi
Ogwe ụlọ oyi 150mm
Ụlọ oyi Pu Panel
Nchekwa oyi Maka ọkụkọ
Nchekwa oyi Maka Azụ
Ọnụ ụzọ Ụlọ Nchekwa oyi
Nchekwa ụlọ ọrụ oyi
Ime ụlọ oyi na-echekwa nri
Ime friza maka azụ na anụ
Ụlọ oyi na mkpụrụ osisi
Nchekwa ime ụlọ oyi mkpụrụ osisi
igwe anaghị agba nchara oyi ụlọ
Akwụkwọ nri ụlọ oyi
Jee ije n'ime ụlọ oyi
nchekwa ụlọ oyi maka akwa mkpụrụ osisi
azụ ọhụrụ na anụ ngwa ngwa gbawara friza oyi sto...
Ebe nchekwa mkpụrụ osisi na akwukwo nri